Nnyefe si Switzerland
Nbunye ngwongwo si Switzerland
Ọrụ Switzerland Apteka na-enye ọrụ na ịzụta na nnyefe nke ngwaahịa si Switzerland. A na - azụ ahịa naanị na ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ ahịa na ozugbo site na ndị na - emepụta ihe. A na-ezipụ na mail na Switzerland.
Ị nwere ike ijide n'aka na ahịa Switzerland dị mma.
1) Nzipu ọkọlọtọ nke izu 2-3 (Switzerland Post)
2) Mbugharị ngwa ngwa ruo elekere 48 n'ebe ọ bụla na Europe, ruo elekere 72 n'ebe ọ bụla n'ụwa (ebe ụgbọ elu ahụ na-efe). Enwere ikike mgbochi. Denye ego na nhọrọ nnyefe na otu.
E zigara ndị Switzerland site na ndị njem na ụlọ ọrụ nzi ozi site na Switzerland. Na mba ọ bụla, enwere mgbochi omenala na ọnụahịa kachasị elu nke ngwaahịa zitere, biko tụlee nke a n'usoro.
Nnyefe na Europe. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-adabere na ngwa ngwa nke usoro ahụ ma gbakọọ n'otu n'otu maka onye ahịa ọ bụla.
Nnyefe na Asia: Enwere ike izipu nhazi site na Switzerland na Hong Kong, site na ebe ị nwere ike izigara Asia site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ebufe. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịnweta ngalaba nke Switzerland Post zigara n'ọdụ ụgbọelu ebe obibi gị.
Nnyefe na USA. Nnyefe nke vitamin na bezretpurnyh preparations na-enweghị ihe mgbochi, na ọgwụ ọgwụ na-ezipụta na mgbakwunye.
Ịga Russia. A na-akwụ ụgwọ maka iwu ruru na 15.000 rubles na Russia na nkwụnye ụgwọ. Ngwaahịa 15.000W dị oke ọnụ. nyere ya na mbuputa zuru oke. Ọ bụrụ na ngwugwu ahụ agafeghị ókèala obodo gị, ọ bụrụ na ngwugwu ahụ agafeghị omenala obodo gị, ọ ga-alọghachi na Switzerland. A na-edezi ọnụahịa niile dị na saịtị na nnyefe na Moscow.
I nwere ike ịtụ ọ bụla ibu uru ruo 1000 euro. 1000 euro ọzọ dị oké ọnụ ngwaahịa na-adịghị ada ka Russia na njikọ na omenala mgbochi, ma ọ bụ n'okpuru ugwo ahịa amounting 30% nke uru nke ngwongwo.
Nnyefe na mba ndị ọzọ nke ụwa. Ozi nnyefe ozi ederede.
Na Switzerland-Apteka ọrụ, ị nwere ike ịtụ ọgwụ, vitamin, nlekọta anụ ngwaahịa, ụmụ ngwaahịa na ndị ọzọ na ngwaahịa na-echekwa na pharmacies na Switzerland na ụfọdụ mba ndị ọzọ. E wezụga na chọrọ nso, i nwere ike ịtụ na ihe ọ bụla ọzọ yiri ngwaahịa maka ojiji nkeonwe, nke ike-zụrụ gị mba.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwaahịa ịchọrọ, ma eleghị anya, ọ dịbeghị na katalọgụ anyị, zite ya njikọ site na ụlọ ahịa ọzọ n'ụwa ma anyị ga-atụnye nnyefe gị na adreesị gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ nwee aro maka nkwado, dee na info@swiss-apteka.com
Nke a bụ ndepụta nke ahịa ọgwụ na Switzerland
Ntinye nke ngwaahịa na Russia naanị maka iji onwe ya na maka ego karịrị 1000 euro.
Ị na-azụta nanị n'ụlọ ahịa ndị isi na Switzerland.
Ndepụta nke ngwaahịa ahụike nke Switzerland na nnyefe na mba niile nke ụwa.
Ịzụta ngwaahịa site na gburugburu ụwa site na ụlọ ọrụ dị na Geneva
© 2011-2019. Nnyefe nke ngwongwo site na mail site na ụlọ ọgwụ na Switzerland Switzerland-Apteka.Com